Choosingasmart password - အဆင့်မြင့် စကားဝှက်တစ်ခု ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်း
Submitted by everlearner on Fri, 10/23/2009 - 17:11
ကျွန်တော်တို့သည် မည်သို့သော စကားဝှက်များကို အသုံးပြုနေကြပါသနည်း။ ကျွန်တော်တို့၏ စကားဝှက်များမှာ - လွယ်ကူသလား ခက်ခဲသလား။ “ အဆင့်မြင့်သော စကားဝှက် ” (Smart Password) များကို အသုံးပြုနေပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနေသော ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အခြားသော တကိုယ်ရေ အချက်အလက်များ အားလုံးကို ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန် အတွက် မည်သို့သော စကားဝှက်များကို အသုံးပြု နေကြပါသနည်း။
Read more about Choosingasmart password - အဆင့်မြင့် စကားဝှက်တစ်ခု ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်း
Read more about UsingaContent Delivery Network - ဖိုင်ဝန်ဆောင်မှု ကွန်ရက် (CDN) ကို အသုံးပြုခြင်း
Read more about Web Servers - ဆာဗာ ကွန်ပျုတာ စနစ်များ
Emailingatask list in - Gmail - ရှိ အလုပ်စာရင်းကို အီးမေးလ်ပို့ခြင်း
Submitted by mmshare on Sun, 08/23/2009 - 08:41
တခါတရံတွင် ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များ (Task Lists) ကို -
အထက်လူကြီးများ ဆီသို့ ပေးပို့ရန် လိုအပ်လာတတ်သည်။
သာမန်အားဖြင့် ဤသို့ပေးပို့ခြင်းကို စာရွက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ Gmail ၏ စမ်းသပ်ခန်းများ (Gmail Labs) အတွင်းမှ အောင်မြင်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလာဒ်တစ်ခုအဖြစ် အီးမေးလ်မှ ပေးပို့နိုင်ပြီ (emailingatask list) ဖြစ်သည်။
Read more about Emailingatask list in - Gmail - ရှိ အလုပ်စာရင်းကို အီးမေးလ်ပို့ခြင်း
Mail and contact import for everyone in Gmail
Submitted by mmshare on Fri, 08/21/2009 - 18:07
လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်ခန့်က Gmail တွင်စတင် ထည့်သွင်းခဲ့သည့် -
ကျွန်တော်တို့၏ အီးမေးလ် အဟောင်းများနှင့် အဆက်အသွယ်များကို အသစ်ဖန်တီးသည့် Gmail account အသစ်များ ဆီသို့ ဆွဲယူထည့်သွင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်း -
ကို ယခုအခါ Gmail account အဟောင်းပိုင်ရှင်များလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Read more about Mail and contact import for everyone in Gmail
CSS Presentations from Max Design
Submitted by mmshare on Sat, 08/15/2009 - 09:15
There are many web design tutorials sites around the Internet.
I studied about CSS, Web Design and Development from these tutorial sites. If I found something useful, I collected, bookmarked and created as my personal list.
Read more about CSS Presentations from Max Design
Next Generation Search Engine by Google - Google ၏ မျို:ဆက်သစ် အင်တာနက်ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်
Submitted by mmshare on Thu, 08/13/2009 - 17:12
ကျွန်တော်တို့ အချစ်တော် Google ၏ Search Engine မျိုးဆက်သစ် တစ်ခုကို အင်တာနက်သုံးသူများ၏ အစမ်းသပ်ခံအနေဖြင့် စတင်လွှင့်တင်ထားပြီ ဖြစ်သည်။
အစွမ်းထက်သော အင်တာနက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Web Search Engine) တစ်ခုကို
တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အဓိက အချက်များမှာ -
၁။ အင်တာနက်တစ်ခုလုံးနီးပါးကို မွှေနှောက်ရှာဖွေခြင်း (Crawlingalarge chunk of the web.)
၂။ ရရှိလာသော အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို အညွှန်းပြုစုခြင်း (Indexing the resultant web pages) နှင့် ၄င်းစာမျက်နှာများတွင်ပါရှိသည့် အချက်အလက်များသည် မည်မျှအထိ အသုံးပြု၊ လက်ခံနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ကို တွက်ချက်ခြင်း (Computing the reputability of the crawled pages)
၃။ တွက်ချက်ရရှိသည့် ရလာဒ်များကို - အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (Ranking the resultant) နှင့် အသုံးပြုသူများ ရှာဖွေသည့် (အသုံးပြုသည့်) မေးခွန်းများနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူညီသည့် စာမျက်နှာများကို မြန်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖော်ပြပေးခြင်း (Returning the most relevant and reliable pages when users search, as quickly as possible.)
Read more about Next Generation Search Engine by Google - Google ၏ မျို:ဆက်သစ် အင်တာနက်ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်
သူငယ်ချင်း ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ သို့
Submitted by Song Chan Moe on Thu, 08/06/2009 - 14:49
မတွေ့ရတာလဲ ကြာပြီကွာ။ အရင်ကလို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း သူငယ်ချင်းတစ်တွေ ရောက်တတ်ရာရာ မပြောရတာ ကြာပြီနော်။
Read more about သူငယ်ချင်း ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ သို့
Easy unsubscribing Newsletter in Gmail - Gmail တွင် သတင်းလွှာများကို အလွယ်တကူ ပြန်လည် ဖယ်ရှားခြင်း
Submitted by mmshare on Sat, 07/25/2009 - 04:19
Gmail မှ အင်ဂျင်နီယာများ၏ အစွမ်းဖြင့် - ကျွန်တော်တို့ - လိုချင်သည့် အီးမေးလ်များကိုသာ လက်ခံပြီး - မလိုချင်သည့် အီးမေးလ်များကို ရောက်ရှိမလာစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မလိုချင်သည့် အီးမေးလ်များကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် - Inbox အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မလာစေလိုပါက "Report Spam" ခလုတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Gmail အသုံးပြုသူများ၏ ဤသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် Gmail စနစ်တစ်ခုလုံး၏ Spam ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေလေသည်။
Read more about Easy unsubscribing Newsletter in Gmail - Gmail တွင် သတင်းလွှာများကို အလွယ်တကူ ပြန်လည် ဖယ်ရှားခြင်း
Submitted by mmshare on Thu, 07/09/2009 - 19:52
Portable web server တွေ အကြောင်း အကြမ်းဖျင်း သိပြီးတဲ့နောက်မှာ − Server2Go Portable Web Server, Uniform Server, XAMPP နဲ့ USB Webserver portable software တွေအကြောင်း ပိုပြီး အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Read more about More on Portable Web Servers